यो झारलाई चिन्नु हुन्छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार सम्मकाे कमाई, कसरी कमाउने सकिन्छ त ! – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : यो झारलाई चिन्नु हुन्छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार सम्मकाे कमाई, कसरी कमाउने सकिन्छ त ! जागर र पौरखमा सिप घुलाउन सके सुन बनाउन सकिन्छ । आफ्नै माटोलाई पगालेर मोती बनाउँन सकिन्छ ।
Prevनेपाल प्रहरीको सुडान मिसन बन्द, मिसन बन्द भएपछि ८६ प्रहरी स्वेदश फर्किए